नेताहरूका लागि लैनाे गाई रहेकाे एमसीसीमा देउवाकाे हताराे किन ? - नेपालबहस
गृहपृष्ठ खोज/विशेष नेताहरूका लागि लैनाे गाई रहेकाे एमसीसीमा देउवाकाे हताराे किन ?
देश अहिले कोरोनाले फैलाएको अघोषित मृत्यूमय महामारीको चपेटामा छ । जनता घरभित्रको चौघेरामा लुकेर बसिरहेका छन् । रोगसँगको लडाईमा साथ दिने औषधोपचारको जोहो गर्न मानव समाजलाई अझै पनि धौ–धौं परिरहेको अवस्थामा ज्यान जोगाउने उपायको खोजी गर्दै नागरिकहरु घरभित्रै बस्न बाध्य भएका छन् । यही समयमा छिमेकी मुलुक भारतले नेपाली स्वाभिमानमाथि बलात आक्रमण गरिरहेको छ । आफ्नाे देशको भौगोलिक साँध सीमाना लगाउनु दुवै देशका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण कार्य हो । यसलाई दुवै देश मिलेर चारकिल्ला गाड्नु पर्ने अवस्थामा आफुखुशी अर्को देशको भुभाग आफ्नाे बनाउन बिरबल मेथड अफ डेभलभमेण्टको गणितीय फर्मुला प्रयोगमा ल्याउनु गल्ती मात्र हैन गम्भीर अपराध पनि हो । यसलाई भारतले समय छँदै सच्याउन जरुरी छ ।
माथि उल्लेखित दुवै बिषयमा लडन् अहिले सिंगो मुलुक एक हुनुपरेको अवस्था छ । देशमाथि आईपरेको प्राकृतिक प्रकोपको रुपमा रहेको कोरोना रोगको महामारी र भारतीय विस्तारवादका बिरुद्धमा हरेक नेपालीहरु हातमा हात मिलाएर जुध्न सक्षम छन् । हिजोको कालजयी नेपाली इतिहासका पानाले पनि हामीलाई कसैको दासत्व र दवदवा स्वीकार्य नहुने प्रमाण विश्व समुदायलाई दिईसकेका छन् र भोलिका दिनमा पनि आवश्यक परेमा तिनै कुराहरुलाई निरन्तरता दिन नेपालीहरु सक्षम रहेको सन्देश अहिले नेपाल साथै विश्वमा रहेका वीर नेपाल आमाका सपुतहरुले दिईरहेका छन् ।
नेपाल एकपछि अर्को गर्दै समस्या झेल्दै आईरहेको अवस्थामा देशमा अति नै विवादित रुपमा रहेको एमसीसी परियोजनाले नागरिकमा अझै पनि अमेरिकी साम्राज्यवादको धङधङी देखाईरहेको छ । आम नेपाली नागरिकहरु विकासको काम भन्दा पनि अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपको त्रासमा रहेका देखिन्छन् । छिमेकी मुलुकले सिंगो राष्ट्रमाथि धावा बोलिरहेका बेला, नागरिकहरुमा राष्ट्रियताका पक्षमा राष्ट्रिय एकता कायम हुँदै गैरहेको बेलामा, देशले विदेशी हस्तक्षेप स्विकार्दैनौ भनेर नागरिकहरुले बिगुल फुकिरहेको बेलामा, एमसीसी परियोजनाका बिषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने अहोरात्र एमसीसी कै रटान लगाईरहनु भएको छ ।
यसलाई परिमार्जनसहित मात्रै संसदबाट पारित गराउनु पर्ने लिखित सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाई सकेको अवस्थामा पहिला सिंगो नेकपामा एकता गरेर आउ भनेर भन्नुपर्ने अवस्थामा प्रमूख प्रतिपक्ष दलको नेता नै रोष्टममा उभिएर किन पहिला एमसीसी पास गर्नुपर्ने एजेण्डा पस्किनु परेको हो ? अझ भनौं किन एमसीसी पारित गराउन किन यतिसारो हतारो परेको हो ? नेपाली कांग्रेसले यस बिषयमा सम्पूर्ण नेपालीलाई पहिला प्रष्ट पार्नु पर्ने हुन्छ ।
देश बिकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनु नराम्रो कुरा हैन । एउटा देशको विकासमा अर्को देशको सहयोग रहनु, सम्पन्न मुलुकले गरिब मुलुकललाई आर्थिक, प्राबिधिक र मानविय सहायता गर्नु आवश्यक छ, हुनुपर्छ । द्विपक्षीय सहायताले ती देशहरुको बीचमा बिवाद हैन सद्धभाव र आपसी एकता अभिबृद्धि हुनुपर्दछ । एमसीसी परियोजना अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित एउटा कार्यक्रम हो । यसले नेपालको विकास आयोजनामा पक्कै पनि धेरै नै टेवा पुर्याउन सक्छ । यसअघि र हालको वर्तमान समयमा पनि अमेरिकी सरकार र अमेरिकी जनताबाट नेपाललाई बिभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगहरु प्राप्त भैरहेका छन् । नेपालको कुनै त्यस्तो क्षेत्र छैन जसमा अमेरिकी सरकार र त्यस देशका नागरिकले सहयोग नगरेका हुन । यसमा आम नेपाली नागरिक र अमेरिकी सहयोग नियोग बीच कुनै विवाद रहेको छैन ।
एमसीसीका बिषयमा पनि यसअघि नेपाली नागरिकमा त्यति बिरोध रहेको देखिएको थिएन । जसका कारण पुर्ववर्ती सरकारकै पालामा यसले संझौताका लागि संसदमा प्रवेश पाएको थियो । एकाएक जनतामा एमसीसीप्रति आएको नकारात्मक प्रभावले यसअघि पनि नेपाली नागरिकहरु यसको बिरुद्धमा सडकमा आईसकेका छन् । यसका साथै नेपाली जनताको शंकाको घेरामा रहेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई अमेरिकाले स्वयं स्पष्ट पारिसकेपछि एमसीसीको बिषयमा स्वयं सरकारमा रहेको दल नेकपाभित्र पनि यसमा दुईथरी मत आईरहेको अवस्थामा, नेकपाकै नेता तथा पुर्व प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा यस बिषयमा सत्यतथ्य विवरण र संझौताको दस्तावेजहरुलाई बुँदाबुँदा अध्ययन गरी यसलाई परिमार्जनसहित मात्रै संसदबाट पारित गराउनु पर्ने लिखित सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाई सकेको अवस्थामा पहिला सिंगो नेकपामा एकता गरेर आउ भनेर भन्नुपर्ने अवस्थामा प्रमूख प्रतिपक्ष दलको नेता नै रोष्टममा उभिएर किन पहिला एमसीसी पास गर्नुपर्ने एजेण्डा पस्किनु परेको हो ? अझ भनौं किन एमसीसी पारित गराउन किन यतिसारो हतारो परेको हो ? नेपाली कांग्रेसले यस बिषयमा सम्पूर्ण नेपालीलाई पहिला प्रष्ट पार्नु पर्ने हुन्छ ।
अमेरिकाले दवावका भरमा पास गराउन खोजिरहेको, नेपाली जनताले एमसीसी भन्दा अरुनै बिकास आयोजना रोजीरहेको, भारत स्वयं पनि आफ्नाे फाईदाको लागि एमसीसी पास गराउन खोजिरहेको बेलामा सरकारको कामको मुल्यांकन गर्दै पर्ख र हेरको अवस्थामा रहनु पर्ने नेपाली कांग्रेस र कांग्रेस पार्टीका सभापतिले एमसीसीलाई यसै अधिबेशनबाट पारित गराउन खेलेको भुमिकाले कतै यस परियोजनासँगै शेरबहादुर देउवालाई समेत राजालाई झै नेपाली कांग्रेसको राजनीतिबाट सदाका लागि बढारेर लैजाने त हैन ? आम कांग्रेस जनमा चासो र चिन्ताको बिषय बनेको छ ।
एमसीसी बिना दालभात अड्किने नक्कली राष्ट्रवादीहरुको कमी नरहेको वर्तमान नेपालको राजनैतिक बृत्तमा केहि कराई चाटनेहरुको रोईलो पनि कुनै नाट्यशालामा अभिनय गर्ने कलाकारको भन्दा कम देखिदैन । भारतले सीमा बिबाद निकालेर माछाको काँडा घाँटीमा अडकिएको झै भैरहेको बर्तमान अवस्थामा अमेरिकाको एमसीसी नेपाली जनताका लागि झनै ठूलो अभिशाप बन्ने त हैन ?? भनेर नेपाली राजनीतिज्ञको माथा पच्चिसी बनाईरहेको छ । हिजो एमसीसीको बिरोध गरेरै राष्ट्रवादी भएकाहरु नै अहिले सरकारको बागडोर सम्हालेर बसेका छन् । नेपाली राजनीतिमा परदेशी राष्ट्रको सदासयता प्राप्त नभई जनताद्धारा निर्वाचित सरकारसमेत जोगाउन गाह्रो हुने कुरा राम्ररी बुझेका नेपालका परजीवी राजनीतिज्ञका लागि एमसीसी पनि लैनाे गाई हुने बुझेर साथै यसमा सत्तापक्ष र प्रमूख प्रतिपक्ष पूर्व सत्तापक्ष दुवैलाई यथोचित फाइदा पुग्ने गरी सेटिङ्ग मिलाएर अमेरिका, सरकार पक्ष र प्रमूख प्रतिपक्षसहितको मिलिभगतमा रातारात एमसीसी पास गर्न लागिएको त छैन ? आम नागरिकमा अब सरकारसँगै प्रमूख प्रतिपक्ष दलसँग पनि उत्तिकै सशंकित हुन थालेका छन् । यसले सरकारका साथै प्रमूख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलाई समेत नेपालीले सँगसँगै कठघरामा उभ्याउन आवश्यक भैसकेको छ ।
त्यसरी नै अहिले एमसीसीका नाममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको एकोहोरो सुगा रटानले कतै शेरबहादुर देउवालाई राजनैतिक रूपमा अपुरणीय क्षति हुने त हैन ? नागरिकको ब्यापक बिरोध भईरहेको, सरकार पक्षमै मत बिभाजन भईरहेको, नागरिकमा अमेरिकी सैन्य अखडा खडा गर्ने रणनीतिको आशंका गरिएको, अमेरिकाले दवावका भरमा पास गराउन खोजिरहेको, नेपाली जनताले एमसीसी भन्दा अरुनै बिकास आयोजना रोजीरहेको, भारत स्वयं पनि आफ्नाे फाईदाको लागि एमसीसी पास गराउन खोजिरहेको बेलामा सरकारको कामको मुल्यांकन गर्दै पर्ख र हेरको अवस्थामा रहनु पर्ने नेपाली कांग्रेस र कांग्रेस पार्टीका सभापतिले एमसीसीलाई यसै अधिबेशनबाट पारित गराउन खेलेको भुमिकाले कतै यस परियोजनासँगै शेरबहादुर देउवालाई समेत राजालाई झै नेपाली कांग्रेसको राजनीतिबाट सदाका लागि बढारेर लैजाने त हैन ? आम कांग्रेस जनमा चासो र चिन्ताको बिषय बनेको छ ।
अहिले सरकार सीमा विवादमा फोश्रो राष्ट्रवाद उरालेर एमसीसी पास गराउने रणनैतिक योजनामा त छैन ? कतै सरकारको कलिलो राष्ट्रवादले नेपाली जनतालाई अमेरिकी सैनिकको बुट पालिस गराउन अग्रसर भैरहेको त हैन ? कोरोना र सीमा बिबादले थलिएका नेपालीहरुले फेरि एकपटक एकजुट भएर एमसीसी बिरुद्ध सडकमा उत्रनु जरुरी भैसकेको छ ।
अघिल्लो लेखआजको माैसम : मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना
अर्को लेखभारतमा २४ घन्टायतामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित
पार्टी विभाजन रोक्न नेकपाका जिल्ला अध्यक्षको माग
नेकपामा केन्द्रिय समिति बैठक बोलाउन हस्ताक्षर संकलन अभियान
नेकपा फुटाएर कांग्रेसलाई सरकारमा लैजादै ओली, देउवालाई अर्थ र गृहको अफर !